Inona no Fantatrao Momba ny The Railway Ticket famandrihana | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Inona no Fantatrao Momba ny The Railway Ticket famandrihana
Isan'andro dia mahazatra ny mahita fahitana an'arivony mpandeha mampiasa ny lalamby. Noho izany, dia tsy mahagaga, fa ny lalamby dia fantatra amin'ny hoe ny niankinan'ny ny firenena. Raha tsy misy, izay mety ho korontana be ary mety hitarika ho amin'ny fisafotofotoana sy ny olana mafy.
Rehefa avy nilaza fa, miely be ny tapakila lasa olana lehibe isaky ny mitranga. Rehefa te-livre ny tapakila, tokony mba ho azo antoka fa azo ampiasaina ny tapakila ary vonona.
Inona avy ireo karazana dingana famandrihana?
Manana samy hafa ny mpanazatra eo amin'ny lalamby tapakila famandrihana. Izy ireo fepetra. Ny fepetra matetika indrindra feno satria tsy boky mpandeha ny tapakila ao amin'io mampitohy.
Mandritra ny fotoana fety, dia lasa zaka sy ny isan'ny olona mandeha eo amin'ny fiaran-dalamby tonga dia afaka mora foana an-jatony maro. Raha an'ny be taona, na manana olana ara-batana, kosa izy, dia tsara indrindra ny boky ao anaty fiaran-dalamby voatokana mampitohy fa tsy fepetra.
Ny karazam-mampitohy manaraka dia ny natory mpanazatra. Ny mpanazatra natory tahaka ny anarana mandeha dia manome fahafahana anao haka aina sy matory mandritra ny dia. Fiaran-dalamby avy amin'ny tsirairay, fara fahakeliny, 10 bogies izay natory mpanazatra.
Afaka mitondra anao manokana ondana sy ny fandriana taratasy raha tianao. Tsara ho an'ireo izay mandeha ao amin'ny teti-bola. The natory 3 dia ambany noho AC mampitohy no aina, ary tsy mihoatra noho ny natory kely mpanazatra Railway Ticket famandrihana.
Lafo kely izy ireo, raha oharina amin'ny natory mpanazatra satria manana AC. Ny 2-dia ambany noho AC mampitohy no fomba iray hafa mandeha. ny aina ary ianao omena amin'ny be lafo vidy.
Toy izany koa no azo lazaina momba ny kilasy voalohany AC mampitohy. Izany dia satria ianao nanome ny karazana fiainana manokana, izay tianao. Izany no fomba lafo indrindra ny nandeha. Farany, ny seza fiara.
Rehefa mandeha lavitra fohy, dia afaka mampiasa ny seza mandeha fiara. Ny manjo dia kely kokoa noho ny kilasy voalohany AC lalamby tapakila famandrihana. Na izany aza, dia te mba ho azo antoka fa ny toerana misy amin'ny alalan'ny SMS mailo, na -tserasera taratasim-bola.
Mampiasa ny PNR, azonao antoka fa ny tapakila dia namandrika. Farany, mila mahita fa ny toerana misy. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fiantohana ny PNR sata dia ho marina eo anatrehanao koa Railway Ticket famandrihana Bookings.
Toy ny mahazatra, manao ny Bookings mampiasa ny loharanom-baovao azo antoka tahaka ny Save A Train.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fall-you-need-to-know-about-the-railway-ticket-reservation%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#famandrihana lalamby tapakila fiarandalamby